Momba anay - Ningbo Yongxiang Plastics Industry Co., Ltd.
Ningbo Yongxiang Plastics Industry Co., Ltd dia orinasa matihanina mirotsaka amin'ny famokarana plastika isan-karazany sprayers, plastika, electroplating vokatra sy ny horticultural vokatra, dia manokana amin'ny famokarana andian-dahatsoratra maromaro sy an-jatony karazana trigger sprayer, nasal sprayer, am-bava sprayer. , sprayer zavona sy lotion paompy, amin'ny maha-mpamokatra matihanina mirotsaka amin'ny famenoana mifanaraka amin'ny salon hatsaran-tarehy, fanafody sy ny fanasan-javatra vokatra.Iny dia manana fitaovana tsara lasitra, tsindrona koronosy, tsy misy vovoka sy ny asa mandeha ho azy, miaraka amin'ny isan'andro ny famokarana mivelatra mihoatra ny 600,000 Ny vokatra dia aondrana any Etazonia, Japon ary firenena hafa.
Ny orinasa dia manana andiana fitaovana famolavolana feno manomboka amin'ny famolavolana bobongolo tsy manam-paharoa, famokarana, mankany amin'ny famolavolana tsindrona mandeha ho azy, fanangonana sy fitsapana ary mahazo mpanjifa an-trano sy iraisam-pirenena miaraka amin'ny vokatra tsara mandritra ny taona maro amin'ny alàlan'ny fianteherana ny fiainany amin'ny kalitaon'ny vokatra ary manararaotra ny fahaiza-manaony. .
Izahay dia mifikitra hatrany amin'ny foto-kevitry ny "mamorona kalitao saika sy tonga lafatra; mizara ny fampandrosoana mirindra sy miandalana", mba hampivelatra hatrany ny fanavaozana miaraka amin'ny fanahy matihanina, ary hiezaka hanorina orinasa iraisam-pirenena amin'ny indostrian'ny sprayer amin'ny alàlan'ny fiankinan-doha amin'ny teknolojia avo lenta sy fitaovana, fampiasam-bola fitaovana sy rindrambaiko avo lenta ary kalitao tena tsara.
Manantena amim-pahatsorana ny hiara-hiasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka manerana ny “kontinanta fito sy ranomasimbe dimy” mifanentana.
Orinasa fametahana tifitra matihanina, fitaovana tonga lafatra, talenta avo lenta, fitantanana ara-drariny, teknolojia famokarana tsara tarehy. Hihaona amin'ny mpanjifa ny vokatra Yongxiang. Mino foana ny herin'ny fanaovana zavatra iray amin'ny fonay izahay, avelao i Yongxiang hamokatra Mihatsara izany.
Ekipa marketing tena tsara, avelao ny mpanjifa bebe kokoa hahafantatra an'i Yongxiang, ampiasao ny vokatra Yongxiang, mahatsapa ny serivisy kalitaon'i Yongxiang. Tsy mivarotra vokatra fotsiny i Yongxiang, fa mandinika bebe kokoa ny experience.We mampiasa mpanjifa.
Tsy mivarotra vokatra fotsiny izahay, Tandremo kokoa ny traikefan'ny mpampiasa!